Ndezvipi zvinhu zvakakosha zvinosanganisira SEO uye web design company?
Pano pane zvose zvaunoda kuziva pamusoro pezvinoita kumusoro-chinyorwa SEO uye web design company. Tichifunga nezvehuwandu hwemigwagwa inonyanya kukosha, kazhinji pamba mabhizinesi emabhizimisi vari kukanganwa kutsvakurudza kwekutsvaga kuti vaise pfungwa dzavo pavanenge vachinyanya kuita pa web page. Nenzira iyo, kuparidzira kwavo kuchava chinhu chakafanana nhangemutange ine gumbo rehuni. Zvinonyanya kukosha, kana uri kutsvaga sangano rakazara rekuchengetedza purogiramu yekutengeserana kwebhizimisi rako, chii icho chakakosha zvinhu zvinosanganisira SEO uye web design company? Mushure mezvose, hauzombodi kudzokera shure pakutanga uye kubhadhara mutoro wose wemari uye kushanda zvakare.
Saka, ngatinzwisise chii chinofanira kusanganiswa mune SEO yakakwana uye kambani yekugadzira webhu kuti uone kuti purojekiti yako inotevera iri kufamba zvakanaka, kudzivisa matambudziko. Chinhu chacho ndechokuti nzvimbo yako huru yekushanda inoshanda inofanira kuva chikamu chinokosha chebhu web design yako yose. Hapana nzvimbo yakasara kune chero mushure mokurapa. Ndinoreva pano kuti webhusaiti yako iripo haigone kuve "yakarongedzwa" kana "yakasvibiswa" ne SEO. Unofanira kuwana izvi zvisina kunaka, uye purogiramu yako yekutengeserana yepaIndaneti ichakundikana kukwanise kuzadzisa zvinangwa zvako zvebhizimisi chikuru.
Kugadzira webhusaiti yeOO-friendly inounza kukosha kwakanyanya kune vashandi inoda kuronga nekunyatsogadzirisa uye chirongwa chakagadzirwa zvakanaka chekuisa mishonga yako kana maitirwo pamberi pevatungamiri varo nenzira yakanakisisa. Hezvino zvakakosha kuti zvifukidzwe neEOO yose yakanaka uye web design company, yekutanga uye yepamusoro:
Webhusaiti yako inofanira kunge iri kuenderera mberi nepurogiramu yakasimba yekutengeserana kwepaIndaneti. Chinhu chose chinofanira kunge chiri munzvimbo-kutanga nemufananidzo wakachena uye wakajeka webhizimisi, kune mamwe mabhizimisi ekutengesa uye kukosha kwekutsvaga.
Kusarudza nzvimbo yakakodzera kupfuura dzose, ita kuti zita rako rezita rako rive rakananga uye rakakosha kune yako nzvimbo yebhizimisi inofarira. Zvinyorwa zvako zvepodoma uye kusiyanisa kwavo zvinofanira kunyatsoenderana newebsite yako huru. Panguva imwecheteyo, zvinokosha kuti vose vese vatungamirire pane imwe shanduro yevhangeri yewebsite yako. Usambofa wakanyengedzwa kana SEO yako kana web design company ikaratidza zita rezita rekutengesa zvikuru pa keywords. Muhupenyu chaihwo, inogona kupa kukurudzira zvishoma chete, kunze kwekungoita mapurogiramu eko.
Ngwarira zvakakwana paunosarudza yakarurama yehupenyu hwehutano hwehurongwa. Nzira yako yehupenyu inofanira kunge yakafananidza zvinangwa zvako zvepamusoro, panzvimbo yeyo inosarudzwa ne SEO yako kana web design company. Heano mamwe mazano anonzwisisika ehurukuro yako:
Kuzivikanwa kwevashandi (mabhuku emabhuku, mabhuku anoshanda, zvinyorwa zvakakwana, webinars dzinobatsira uye FAQ zvikamu);
Kukwikwidzana kwepamusoro (user guides, case studies, product or product reviews, tutorials, and representations);
Kutendeuka uye mutungamiri wechizvarwa (pasina miedzo kana kuongororwa, kuongororwa kwevatengi, nyaya dzekubudirira, zvipupuriro zvechokwadi kubva kuvanhu vanofara, nezvimwewo.).
Funga nezvewebsite yako kushandiswa sekubatanidza kushandiswa kweEO technical, kushandiswa kwe-web design, uye intuitive pa-page navigation. Ndiri kureva kuisa mapeji ako pamwe chete iwe unofanira kuchengeta mupfungwa zvose zvaunoda kuguma-user uye zvitsva zvekutsvaga kutsvakira zvinangwa. Nenzira iyo, pano ndiyo huru hukuru hukuru hunofungidzirwa neyakanaka SEO uye web design kambani:
Chigadziro-chimiro chekushandisa kuchengetedza peji rakanakisisa rinokurumidza kufamba;
weWebhu yekugadzira hutungamiri hwekuona maonero ega ega ega peji ichicherechedza kukosha kwayo;
Kuenda, peji peji, uye nzvimbo yose yekushandura inofanira kunge yakanyatsojeka kune vose - vose vari vashandisi vako uye vanotsvaga tsvakurudzo;
Inonzwisisika uye yakagadziriswa nzvimbo yekutsvaga nzvimbo yekutsvaga ruzivo rweku browsing zviri nani, nekufungidzira zvinangwa;
Mobile-inogadzirisa kugadzirisa kuita zvinhu zviri nyore nekukurumidza pazvigadzirwa zvinotakura;
chimiro chakareruka kupinda, iyo inofanira kuva yakawanikwa uye yekuzadza-seanokwanisa.
Kudzokera kunzvimbo ye indexation, ngatitarisei - vafambisi vekutsvaga vanofanira "kuverenga" peji yenyu uye " tora chisarudzo chepamusoro pane webhusaiti yako yemakiromiti nzvimbo panzvimbo yeGoogle's SERPs. Uye izvi zvinofanira kuzivikanwa nezvose zvakakodzera SEO uye web design company kuti iongororwe zvakanaka nokuda kwekubhadhara. Ndinoreva kuti peji yako yepamusoro inofanira kupiwa mune zvinyorwa-zvinyorwa zvinopfuura pane peji-peji kugadzirwa kana kuonekwa.
Zvechokwadi, uchava nemamwe mapeji akabatanidzwa nemifananidzo, ma PDF mafaira, mavhidhiyo, kana mamwe mimwe michidhiyo yehupenyu hwehutano hwakanaka hwemushandisi, uye kutarisa zvakanaka. Kunyange zvakadaro, kana chidimbu chewebhu yako yekugadzira chiri chokuita nekuzadziswa kwakakwana, usakanganwa kutaurira injini yekutsvaga mumutauro wakajeka pamusoro pezvinhu zvose zvinoonekwa zvakagadzirwa pamapeji ako.
zvakare zvakare - pasina kana mufananidzo wekugadzirwa kwekwenyuka kunokanganisa bhoti haikwanisi kuwana chikamu chechioni chezvinhu zvaunoona zvekunyorera. Kwete kureva kuti mifananidzo yako, mavhidhiyo, uye mapepa anogona kushandiswa kune imwe nzvimbo yakanakisisa yekutsvaga motokari. Uyezve, iyo inogona kuva mukana wakasiyana-siyana wokuisa mamwe mazwi akawedzerwa kana mazwi akareba-misi yemikana yakawanda yepamusoro yekuratidzwa pakati pemigumisiro yepamusoro yekutsvaga.
Heino zvose zvaunoda kuziva pamusoro pekugadzirwa kwechifananidzo. Iyo nzira inonyatsojeka. Ndinoreva kuti zvose zvinenge zvisiri nyore - kungochengetedza zvinhu zvose zvinotsanangura, zvakakodzera zvakakodzera, uye kudzivisa spam kana kudarika. Heino urongwa hwebhuruti rwechifananidzo SEO inoshandiswa nekambani yega web design design:
Zita rekufanirwa rinofanira kupa tsanangudzo yakajeka uye yakajeka kune imwe mufananidzo;
Magwaro emagetsi ega anofanira kupa chirevo chekufananidzira chinyorwa kunzwisiswa ne "mapofu" ekukwezva bots, kusimbisa kuonekwa kwehuwandu hunoenderana nekukosha kweshoko rinorema;
Ita zvifananidzo zvose zvinoshandiswa kune zvikamu zvekugarisana nevanhu vachishandura OpenGraph kana imwe shanduro iri paIndaneti inowanikwa mukusvikirika;
Ongorora usayizi hwemufananidzo kuti uve nechokwadi chekutsvaga nokukurumidza uye peji yepamusoro kutengesa kasi, pasina kuomesa faira pamutengo wekuonekwa kwayo;
Kuti zvive nehuwandu hwewebsite uye hurongwa hwakanaka, usakanganwa kuisa mifananidzo yese yakagadzirwa pamapeji ewebhu ku XML yako huru yepaiti.
Nzira iyo, iva nechokwadi chekuti peji rako rine zvinyorwa (kunyanya chikamu chayo chinokosha) nguva dzose rinowanikwa nyore nyore, rinonzwisiswa zvakajeka uye rine kutarisa kwakanaka mukati memuwe webhusaiti yako huru. Kungoita nenzira yakarurama iyo inonzwisisika - yekanganwa pamusoro peavo vane zvinyorwa zvepamusoro zveEEE teknolojia kana chero nzira dze web design. Kuita chekuongorora kaviri pane webhusaiti yako, kune nguva chete iwe unogona kukanganwa nezvazvo kune imwe nzvimbo Source .